ပြည်တွင်းသတင်း Archives - TheeSayChin
July 23, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
ရွှေတောင်မြို့တွင် ရည်းစားကိုအလုပ်ထုတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်ရှင်အား ဓါးနဲ့ ဝင်ခုတ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ် သရက်တောရပ်ကွက်၊ တရားရုံးလမ်းထောင့်နှင့် ရန်ကုန်- ပြည်ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ယမန်နေ့က နေ့လည် ၁ နာရီခန့်က ဒါးခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါတယ်
သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ကောက်ရတာကို ပိုင်ရှင်အားပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးက taxiယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီ….
သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ကောက်ရတာကို ပိုင်ရှင်အားပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးက taxiယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီ…. 22ရက်7လ2019 ညပိုင်းမှာမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တံတားဦးလေဆိပ်ကြီးမှာ ဧည့်သည်လာကြိုတဲ့ကားတစ်စီးမှ သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ပြုတ်ကျနေတာကို မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ win လေဆိပ် taxiဂိတ်မှာကားပြေးဆွဲနေသော …. ယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီမှကောက်ရကာ သက်ဆိုင်ရာwin လေဆိပ်ဂိတ်မှုးအားသွားအပ်ကာ ဂိတ်မှုးမှလဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်မှုးရုံးခန်းအား ထိုအိတ်အားသွားအပ်စဉ်
အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ သားလေးရယ်. . နောင်ဘ၀မှာ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ မိဘတွေ စွန့်ပစ်ခဲ့လို့ “YGW ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်း မန္တလေး” က ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာသားငယ်လေး သေဆုံးသွားပါတယ်. . .”YGW ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်း မန္တလေး”
July 20, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
အင်​တာဗျူးမှာ အမှန်​တရား​တွေဖွင့်​ချလိုက်​ပြီဖြစ်​တဲ့ ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့ ဖခင်​ နေပြည်တော် သပြေကုန်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းက အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေး တဲ့ မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယား (နာမည်ရင်းမဟုတ်) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ
(၁၀)တန်းကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ယနေ့စီရင်ချက် ချလိုက်ပါပီ …. မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်မိန့်ချလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကျိုင်းတုံတွင် ဆယ်တန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းကိုမီးရှို့ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည့် စိုးလွင် (၄၀
သားဦးလေးကို နာမည်မပေးရသေးဘူးဆိုတဲ့ အောင်သူ… မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တို့စုံတွဲလေးကတော့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးက နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်
အောင်ကြီးကသိန်း ၅၀၀ အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနိုင်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သမီးတစ်ဦးမှပြော
July 19, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
အောင်ကြီးကသိန်း ၅၀၀ အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနိုင်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သမီးတစ်ဦးမှပြော ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုဖွင့်ခံထားရသူ ကိုအောင်ကြီးဟာ ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိန်း ၅၀၀ တစ်ချိန်တည်းရှာရန် မလွယ်တာကြောင့် တရားခံအဖြစ်ဟုတ်မှန်သည်ဟု ဝန်ခံနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးတစ်ဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့
July 19, 2019 July 19, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝှမ်ကို လုပ်ကြံတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးခွဲခံရမှု ဖြစ်စဉ် နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင် ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၉) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အာဇာနည်ကုန်း၌ ဗုံးပေါက်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် အား
ဒေါ်စုပြောတဲ့ ” သား ထိန်လင်း .. လူမိုက်ကြီး …အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေရတာ …
ဒေါ်စုပြောတဲ့ ” သား ထိန်လင်း .. လူမိုက်ကြီး …အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေရတာ … ” သား ထိန်လင်း .. လူမိုက်ကြီး …အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေရတာ .. ‘
မြိတ်မြို့တွင် ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ ရွှေထည်လုယူမှုဖြစ်ပွား….
July 18, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
မြိတ်မြို့တွင် ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ ရွှေထည်လုယူမှုဖြစ်ပွား…. 18.7.2019…..ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ ရွှေထည်လုယူမှု မြိတ်မြို့တွင်ဖြစ်ပွား….ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရွှေထည်လုယူမှုကို အခု CCTV မှတ်တမ်းမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ နော် …။ မြိတ်မြို့ ဆိပ်ငယ်ဈေး မျက်နှာစာတန်းမှာရှိတဲ့ ကောင်းဆုရွှေဆိုင်ထဲကို ဇူလိုင်လ ၁၈
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် Image:fb/thinzar wint Kyaw သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အခုဆိုရင် သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်တိုက်ပြန်လည် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ အချစ်ရေး အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ သင်ဇာတစ်ယောက် အလုပ်တွေကို အရင် ထက်ပိုပြီး အချိန်